20-sano kadib shacabka Puntland masoo xulan doonaan baarlamaan biilkooda kahor mariya danta guud (dhegayso) – Radio Daljir
20-sano kadib shacabka Puntland masoo xulan doonaan baarlamaan biilkooda kahor mariya danta guud (dhegayso)
Seteembar 27, 2018 10:22 b 0
Deegaamada Puntland waxaa kasocda soo xulista xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka Puntand.
Marka laga hadlayo qorshihii Puntland markii la dhisayay la dajiyay oo ay ka mid ahayd inay gaarto nidaamka doorasho ee shaqsi iyo cod, si talada shacabka loogu soo celiyo ayaa waxaa sababaha ugu waawayn ee dib u dhacaasi iyo kuwa kalle keenay loo sababeeyaa baarlamaanadii soomaray Puntland oo ka gaabiyay masuuliyiinta xilalka haya inay kula xisaabtamaan balanqaadyadii ay shacabka u sameeyeen, badalkeedana ka mid noqda xubno ku milma xukuumadda markaasi jirta.
Si ka duwan sidaase, ayaa waxaa hadda kabilowday deegaamada Puntland dhaqan cusub oo aan horay loo arag oo ah in xubnaha baarlamaanka lagu soo xulo qaab doorasho ah oo ah inay ergo matalayso beesha xildhibaanka uu ka imaanayo ay u codeeyaan dhoowr musharax oo xilalka raadinaya.
Doorashadiisii u horaysay ee nooceeda ah ayaa waxaa kadhacday magaalada Bosaso kaasi oo lagu doortay xildhibaan Jaamac Yaasiin Jaamac inuu matalo mid ka mid ah xubnaha baarlamaanka Puntland beelaha gobolka Bari.
Haddaba doorashadaasi iyo qaabka ay u dhacday iyo waxa laga baran karo waxaan ka waraysanay
Caaqil Cismaan Ismaaciil Barre oo ka mid ah oo ah cuqaasha gobolka Bari.
Wiil dhalinyaro ah oo magaalada Muqdisho aan wax shaqo ku helin CVyadiisa ayaa qaab cusub shaqo ku raadinaya (dhegayso)